Taomina Hanao Firaisana | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabuverdianu Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndau Norvezianina Ossète Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Télougou Umbundu Urhobo Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Mety hieritreritra ianao hoe: “Tsy aleo ve manaiky e? Ny olona rehetra aza manao an’izany daholo.”
Mandiniha tsara aloha!
Zava-misy: Tsy ny rehetra no manao an’izany.
Marina fa maro be ny tanora manao firaisana, araka ny hita tamin’ny fanadihadiana. Tanora 2 ao anatin’ny 3 any Etazonia, ohatra, no manao firaisana, nefa mbola mpianatra eny amin’ny lise. Midika koa anefa izany fa tanora 1 ao anatin’ny 3 no mbola virjiny, ary betsaka izany.
Inona no tsapan’ireo efa nanao firaisana? Hitan’ny mpikaroka fa maro no...
Manenina. Ny ankamaroany mihitsy no milaza hoe manenina.
Tsy asianao vidiny ny vatanao raha manao firaisana alohan’ny fanambadiana ianao. Toy ny sary hoso-doko lafo vidy ilay izy, nefa amafanao tongotra
Mifampiahiahy. Samy mieritreritra izy roa hoe: ‘Sao dia efa nisy olon-kafa koa nanaovany firaisana?’
Diso fanantenana. Maro ny ankizivavy diso fanantenana any anatiny any, satria ilay ankizilahy nantenainy hiaro indray no nanararaotra azy. Matetika koa no tsy tena tian’ny ankizilahy intsony izay ankizivavy nanaiky hanao firaisana taminy.
Fehiny: Tena sarobidy ny vatanao ka aza omemena olona fotsiny. Asehoy fa vitanao ny mankatò ilay didin’Andriamanitra hoe fadio ny fijangajangana. Mbola ho afaka hanao firaisana ihany ianao rehefa manambady. Tsy hanenina na hikorontan-tsaina toa an’ireo nanao firaisana alohan’ny fanambadiana ianao, fa mba tena hankafy an’ilay izy.—Ohabolana 7:22, 23; 1 Korintianina 7:3.
Manontany ny Tanora, Boky Faha-2
Anisan’ny horesahina ao ny momba ny fianarana, fialam-boly, namana, fifandraisana amin’ny ray aman-dreny, fiovana eo amin’ny vatana, fihetseham-po, ary fitiavana.
Nody Ilay Zanaka Adala